Maalinta: 12-ka July, 2019
In kasta oo ay Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara ay ka fulineyso mashruucyo cusub oo gaadiid oo ay ka waddo dhammaan caasimadda, waxay sidoo kale dayactireysaa waddooyinka hadda jira ee dhammaystiray noloshooda waxtarka leh isla markaana naafeeyay. Baahiyaha mudnaanta ee muwaadiniinta [More ...]
Nadiifinta iyo Dayactirka Jidadka Yaanda XT 83DBM Natiijad ahaan Tender 2019 / 291783 GCC xadka qiimaha 444.149,78 TL iyo qiyaasta qiimaha 595.173,49 TL ee Maareeyaha Wadooyinka Waddanka Turkiga YHTT Agaasinka Gobolka (TCDD) [More ...]
CW Energy waxay soo saartay "saqafka dusha sare ee adkaysiga, shaabadaysan cadceedda leri oo ay ugu yeedhaan" tiles qarnigii .. Fasaxyada saqafka saqafka ah ee la soo saaray sida 'tale tile ee qarnigii uygun' waxay ku habboon yihiin iftiinka qorraxda tooska ah. Taleefooyinka leh xargaha qaaska ah, saqafka sare [More ...]
Basaska Dawlada Hoose ee Denizli, 14 Luulyo 2019 Xulashada Xulashada Iskuulada Dadweynaha Axada (KPSS) ayaa xor u ah inay galaan. 14 ee bisha Denizli Luulyo 2019 ayaa galaya KPSS maalinta Axadda [More ...]
Kormeer adag oo loogu talagalay Gaadiidka Badbaadada iyo Raaxada ee Manisa
Dowladda Hoose ee Manisa, oo fulisa shaqooyin lagu hubinayo in gaadiidka dadweynaha ee nabadgelyada iyo nabadgelyada ah ee muwaadiniintu, uu sii wado kormeerkiisa gobolka oo dhan. Baaxaddaas dhexdeeda, gaadiidka dadweynaha ee xarunta degmada Salihli iyo nawaaxigeeda [More ...]
Mashruuca gaadiidka dadweynaha ee mudnaanta leh ee İzmir ayaa lagu daray barnaamijka maalgashiga ee Buca Metro. Duqa Magaalada caasimadda ee magaalada Izmir Tunç Soyer ayaa sheegay in ay doonayaan in ay bilaabaan shaqooyinka dhismaha sanadka soo socda iyo in ay furaan adeegga Buca shan sano gudahood. [More ...]
Howlaha Sahaminta Korontada Sare ee Bilowga ah ayaa la bilaabay
Duqa Sandıkli Mustafa Cöl ayaa ballanqaaday waqtiga doorashada iyo Wasiirka Prof. Dr. Baaxadda mashruuca "Speed ​​Speed ​​Train" oo ay taageerto Veysel Eroğlu, daraasado daraasad cilmiyaysan oo jiil ah ayaa lagu bilaabay saldhigga. [More ...]
U wac midnimada qaranka ee waxsoosaarka HHT
Ramazan Uysal, Guddoomiyaha Laanta Eskisehir ee Ururka Shaqaalaha Rayidka ah, wuxuu ugu baaqay midnimada midabtakoorayaasha, NGO-yada iyo hoggaamiyayaasha magaalada si loo fuliyo soosaarka Voltage-ka Qaranka ee Eskisehir. Uysal "Tani waa sabab qaran," ayuu yiri. FADHIGA ESKISEHIR [More ...]
Bartilmaameedka Meeleenta Gawaarida Tareenka 80 Boqolkiiba
Turkey, sidoo kale dardar-guuro nidaamka tareenka meelaha wax soo saarka gudaha bilaabay in meel kasta. Sababtan awgeed, Turkey, si ay u dhamaystiraan wax soo saarka ee ku qaybood tareen korontada qaranka ee 2020, 2022 si ay u bilaabaan wax soo saarka serial ee tareenka korontada qaranka [More ...]
15 Gaadiidka Guud ee Bilaashka ah ayaa Bila Bixi doona July
15 3 ee isku day afgarad bishii Luulyo. Sidaa darteed, adeegyada gaadiidka dadweynaha iyo adeegyada Başkentray iyo Marmaray waxay noqon doonaan bilaash. 15 la wareegtada Madaxweynaha ayaa daabacay in faafinta rasmiga ah by saxiixa Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Turjubaanka qiimaha alaabta ee Teleferik Alanya
In kasta oo ay soo ifbaxayaan qiimaha xaddiga xadhkaha goosadka ah ee ay dejisay Golaha Deegaanka Alanya tan iyo bishii Febraayo, waxay ahayd mid naxdin leh, oo haddii qandaraaskii hore aan wax laga beddeli lahayn, qiimaha qiimaha jidku wuxuu ahaan lahaa inta u dhaxaysa 14,4-21,6 TL. Dhanka kale [More ...]
TCDD iyo KGM waxay shaqaaleysiinayaan shaqaale dowladeed. Kala doorbidida KPSS ee faahfaahinta dalabka ee shaqaalaysiinta lagu sameeyay wararkayaga. Waa tan foomka dalabka oo leh faahfaahinta ogeysiiska iyo nambarada astaamaha. KPSS 2019 / 1 Tilmaanta la doorbiday ee la soo dhaafay [More ...]